Ahoana no mba hahazoana ny intraday cryptotrading? - Blockchain News
Febroary 28, 2018 Admin
Ahoana no mba hahazoana ny intraday cryptotrading?
io paikady “Сoward” – fa tsara mba hahazoana tsy, fa miovaova. 70% ny asa rehetra intraday scalping efaha amin'ny isam-. Tsy mampiasa leverage sy hijanona-fatiantoka.
Raha ny alakamisy hividy bitcoin amin'ny fara fahakeliny, any amin'ny elanelam-potoana io amin'ny 13:40 ny 15:00, ary avy eo mivarotra mandra- 21:00, Tena ambony izany mety ho fitadiavam-bola 1% rehefa avy deduction ny naniraka. Izany no ela-fantatra fitsipika: Azia nankany am-pandriana sy fanamboarana, ny West mifoha ka mahazo miletsy ny cryptocurrency. Raha toa ka tsy mivarotra, avy eo mivarotra amin'ny 02:40, ary avy eo dia hividy amin'ny 07:20.
miaraka 1000 dolara mandray ny tombony ny 10 dolara. Fa cryptocurrency, dia toa ho kely, saingy ny fidiram-bola marin-toerana. Misy 20, misy 12, misy 7 dolara 20 cents ny.
Afaka mahita vahaolana hafa noho izany varotra – ny valin-tabilao. Isika rehetra liana amin'ny lamina izay mety ho hita amin'ny alalan'ny fandinihina tsara ny soatoavina isan'andro ny cryptocurrency, ny zavatra hafa rehetra satria mitovy.
Hentitra fankatoavana ny drafitra
Amin'ny maha-fitsipika, ny maha samy hafa ny fividianana sy ny fivarotana ao amin'io tetika avy 0.5 ny 1.5%. Samy mahafantatra ny tsirairay fa ny cryptocurrency tsena dia mikorontana. Maro ny olona nahita ny maso ny fomba atao haingana ny BTC, avy any amin'ny toeram- 11,000 dolara, mitombo fohifohy ho amin'ny 12,000 dolara, ary izany no saika 10% ny tombom-barotra. Fa amin'izao tetika tsy manantena, ohatrinona izany dia hitombo, eto dia ny fitsipika: dia nanao tombony ny 1.5% – hanidy ny toerana.
raha, rehefa avy mividy ny cryptocurrency, hitanao lehibe alàlana amidy na ny vaovao ratsy lafika, ary indraindray ianao trite ho nilaza ny zavatra manindry mandry fa hisy ny fihenan'ny, dia hanakatona avy hatrany ny toerana. Fitomboana ny pananana na dia ao 1.0% dia ahafahana any amin'ny aotra, kokoa ny marina, amin'ny kely indrindra tombony ny 0.5% raha ny asa nanirahana ny fifanakalozan-kevitra dia 0.5%.
Tsarovy: tsy maintsy misy ny drafitra hentitra izay tsy maintsy arahina amin'ny. Na inona na inona ny mety ho fahaverezan'ny soa, izay mety ho, raha tsy mivoaka. Ny hetsika efa voaomana marina foana.
Aiza ny varotra ary inona no cryptocurrency hampiasa
Isika amin'ny alalan'ny varotra ny broker Libertex
Mampiasa ny “volamena”, amin'ny heviny, lisitry ny vola madinika:
BTC, BCH, BTG, tsipika, DOGE, Ita, sns, LTC, TSY, onja, Zak.
– fa ireo vola madinika misy volatility ampy
– no ilaina predictability sy ny repeatability
– cryptocurrencies ireo koa ny tsara ho mpanelanelana amin'ny tontolo-teny po, sy ny fampiasam-bola maharitra.
Indrisy, misy tsipirian'ilay
Io fomba ara-barotra dia tena sarotra ny fitondran-tanana. Ohatra, raha maniry ny tsena rehetra herinandro ela, Avy eo amin'ny faran'ny herinandro, Matetika nalaina nihena, raha ny tsena falls – amin'ny faran'ny herinandro, ny lanjan'ny vola amin'ny crypto mitombo.
Ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny paikady ity
– Isam-bolana no soa 40-45%
– Afaka hiala ny tombom-barotra avy amin'ny herinandro voalohany amin'ny varotra
– Tsy inoana fa ho afaka mba hahazoana vola amin'ny lamborghini, fa, azonao atao izany fibodoana ho toy ny eo ho eo ny asa
– Ny fahalavoan 'ny tsena dia tsy misy fiantraikany be ny portfolio-
Previous Post:Rakuten nandefa ny azy cryptocurrency
Next Post:Alemaina tsy hamitaka Bitcoin raha toa ka ampiasaina ho toy ny fomba fandoavam-bola